Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Misokatra indray izao ny fizahantany any Puerto Rico
Ny filoham-pirenena sy ny tale jeneralin'ny Fikambanan'ny Hotely sy fizahan-tany any Puerto Rico, Clarisa Jiménez, dia nampahafantatra androany fa misokatra amin'ny asa aman-draharaha i Puerto Rico ary vonona ny hanohy handray mpizahatany, na dia nisy aza ireo fihetsiketsehana tany amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Nosy tato anatin'ny andro vitsivitsy.
“Azo antoka fa efa nandalo fihetsiketsehana andro vitsivitsy tany amin'ny faritra atsimo andrefana izahay. Na izany aza, trano fandraisam-bahiny, seranam-piaramanidina, seranan-tsambo, fisarihana fizahan-tany ary trano fisakafoanana, ankoatry ny hafa, any Puerto Rico, dia misokatra ary vonona handray mpitsidika ”, hoy ny fanazavan'i Jiménez. “Ny fonay sy ny vavakay dia miaraka amin'ireo rahalahinay sy rahavavinay avy any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Nosy. Malahelo izahay mahita ity toe-javatra ity, saingy azonay antoka tanteraka fa hiarina amin'ity fotoana sarotra ity izahay ', hoy ihany izy.
"Tianay ny hampirisika ny mpitsidika rehetra handeha, www.discoverpuertorico.com, hahazoana ny fanavaozana ny dia isan'andro sy ny Q&A amin'ity toe-javatra ity ", hoy ny famaranana.
Ny Fikambanana Hotel sy fizahan-tany any Puerto Rico dia fikambanana misolo tena ny sehatry ny fizahan-tany tsy miankina any Puerto Rico. Niorina tamin'ny 1950, ny Fikambanana dia manana mpikambana 400 mahery, anisan'izany ny hotely lehibe, salantsalany ary hotely kely; trano fisakafoanana; Airlines; sy orinasa hafa manompo ny indostrian'ny fizahantany any Puerto Rico.